प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्– ‘उहाँजस्तो आत्मविश्वासी देखेको छैन’ | Makalukhabar.com
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक भन्छन्– ‘उहाँजस्तो आत्मविश्वासी देखेको छैन’
मंसिर १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधारको क्रम जारी रहेको छ ।
उनको फिजिकल तथा बायोकेमिकल मापदण्डसमेत अपेक्षाकृत सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुखबाट आवश्यक ठोस खाना दिन थालिएको छ । पाचन राम्रो देखिएको छ’, उनका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि यही मङ्सिर १० गते एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।
महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिबारे उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बायोकेमिकल अन्तर्गत श्वास–प्रश्वास, रगत, पिसाब, रक्तचापलगायत अवस्था ठिक रहेको बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओली खतरामुक्त हुनुहुन्छ । तर, सघन उपचारकक्षमा रहनुभएको छ । विस्तारै हिँडडुल गर्न थाल्नुभएको छ । मिर्गौला लगायत समग्र स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ’, चिकित्सक शाहले भनिन्, ‘घाउको सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि मात्र सघन उपचारकक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको हो ।’
‘प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वास तह (कन्फिडेन्स लेबल) उच्च रहेको छ, उहाँ आत्तिनुभएको छैन । मलाई छिटो डिस्चार्ज गर्नुपर्यो भनिरहुनु भएको छ । उहाँजस्तो आत्मविश्वासी मैँले कसैलाई देखेको छैन’, उपचारमा संलग्न प्रा डा.अरुण सायमीले भने । प्राडा.सायमी वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया गरिएको एपेन्डिसाइटिसको घाउ विस्तारै निको हुँदै गएको छ । घाउले शरीरको अन्यत्र भागमा सङ्क्रमण गरेको छैन । अरु बिरामीभन्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीको घाउ निको हुन समय लाग्छ । यही क्रममा सुधार भएमा अर्को हप्ता प्रधानमन्त्रीलाई डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ ।’ उपचारमा संलग्न प्राडा रमेशसिंह भण्डारीले भने । प्राडा. भण्डारी कलेजो प्रत्यारोपणका विज्ञ हुन् ।
‘जति चाँडो घाउ निको हुन्छ, त्यत्ति नै प्रधानमन्त्री पूर्ववत् काममा फर्किन सक्नुहुन्छ । घाउ छिटो निको बनाउन हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ’, उनले भने । अहिले चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्रीको समग्र स्वास्थ्यलाई विशेष निगरानी गर्दै उपचार गरिरहेका छन् । ‘शल्यक्रिया गरिएको घाउबाट सङ्क्रमण हुन नदिन र मिर्गौलाको कामलाई निगरानी गरिरहेका छौँ’, डा शाहले भने ।
चिकित्सकका अनुसार प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलबाट रक्तस्राव हुन नदिन डायलाइसिस गर्ने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको पुनः प्रत्यारोपणको कुरा आइरहेको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा निजी चिकित्सक डा।शाहले भने, ‘कुन समयमा कहाँ प्रत्यरोपण गर्ने अथवा डायइलिस जारी राख्ने भन्नेबारेमा उचित समयमा उचित निर्णय लिन्छौँ ।’ सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा। उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचारमा सेन्टरले आवश्यक सबै काम गरेको जानकारी दिए । रासस
फ्राइडे रिलिज 'मखमली मखमली': पहिलो दिनमै हाउसफुल
पिँजडामा पालिएका कुखुराबाट उत्पादित अण्डा नखानुस्, अस्वस्थकर हुन्छ
मंसिर २६, काठमाडौँ । पिँजडामा पालन गरिएको कुखुराबाट उत्पादन भएको अण्डा र मासु खानका लागि स्वस्थकर नहुने बताइएको छ । देशका अधिकांश ठाउँमा पिँजडाभित्र कखुुरापालन गरिँदै आएकाले पिँजडामुक्त खोरका बारेमा चेतना जगाउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । पिँजडामुक्त खोरको प्रयोग र विस्तारका लागि अभियान चलाएको एनिमल... जारी राख्नुहोस...
मंसिर २६, काठमाडौं । उपचारबापतको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपाकी ललितादेवी खंगले विराटनगरस्थित विराटनगर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन पाएकी छैनन् । एकमहिने सुत्केरी ललिताका पति गोपीकुमारले रकम जोहो गर्न आफ्नो गाउँ र सदरमुकाममा भिख माग्न थालेका छन् ।विराटनगर... जारी राख्नुहोस...